OpenSUSE Leap 42.3 Kubva paSUSE Linux Enterprise 12 SP3 Inowanikwa | Kubva kuLinux
OpenSUSE Leap 42.3 yakavakirwa paSUSE Linux Enterprise 12 SP3 inowanikwa
Kutenda kuna OpenSUSE tsamba taona kuti yatovepo kurodha pasi VhuraSUSE Leap 42.3 iyo inoenderana nezvinozivikanwa SUSE Linux Enterprise 12 SP3 uye izvo zvinoitirwa marudzi ese evashandisi, kubva kuvanhu kuenda kumakambani. Iyi vhezheni itsva ye OpenSUSE inouya yakatakurwa nezvakawanda zvinowedzerwa, kuisirwa sedesktop uye sevha inoshanda sisitimu, uyezve rakanakisa gore kubatanidzwa.
VhuraSUSE Leap 42.4 mhedzisiro yemwedzi inopfuura misere yekuyedza kusimudzira nechikwata cheOpenSUSE, inosanganisa iyo tsanga 4.4, akasiyana siyana akagadziridzwa software ayo anogoverwa munzvimbo dzakatsaurirwa kumitambo, hutano, hofisi otomatiki, network yekutarisa, pakati pevamwe.
1 Nezve OpenSUSE Leap 42.3
2 Maitiro ekudhawunirodha OpenSUSE Leap 42.3
Nezve OpenSUSE Leap 42.3
Isu takaedza iyi vhezheni uye isu tinogona kupupurira kugadzikana kwayo, iyo GNOME desktop nharaunda inonzwa kuve yakajeka, uye kusarudzwa kukuru kwesoftware yakaiswa kunoreva kuti isu tinogona kunakidzwa nehurongwa hwekushandisa kune vese vashandisi nenzira yakapusa uye inokurumidza.
Pakati pezvinhu zvakawanda zvinopihwa neiyi nyowani vhezheni yeOpenSUSE tinogona kunyora zvinotevera:
Kubva paSUSE Linux Enterprise 12 SP3 Enterprise Kuburitswa.
Inesimba uye yakapusa yekushandisa chishandiso, iyo inotitungamira isu kuburikidza ese anodiwa madanho kutanga OpenSUSE Leap 42.3.
Inotarisirwa kumarudzi ese evashandisi: vadzidzi, nyanzvi, maneja maneja, vanogadzira, nezvimwe.
Inopa yakakodzera sisitimu yekushandisa yemuviri, chaiwo kana gore nharaunda.
Inopa rutsigiro rukuru rwekutamba pane linux, inotsigira Steam, Waini uye PlayOnLinux pamwe nekupa kusangana pamwe nemazhinji emitambo yakagadzirirwa Linux.
Iyo ine akasiyana mafomu ekushandisa akaisirwa nekutadza, yakanangana nenyanzvi uye zvakajairika vashandisi, inovhara hofisi otomatiki, yakatsaurwa software, sainzi nenzvimbo dzakasiyana siyana.
Huwandu hukuru hwemapakeji akagadziridzwa, aine yakawanda yekuchengetedza mirawo uye rutsigiro rweakasiyana Hardware.
Inosanganisira iyo Linux Kernel 4.4.
Yakashongedzerwa neiyo KDE 5.8 desktop nharaunda seyakagadzika pamwe nekugona kumhanya GNOME 3.20 (Yakakurudzirwa). Saizvozvowo, nharaunda dzakasiyana dze desktop dzinogona kuwedzerwa uchishandisa iyo OpenSUSE desktop sarudzo yekushandisa.
Yakanaka kuitiswa sevha, nekuti inopa zvese zvishandiso zveyast pasina kudikanwa kwenzvimbo yakajeka.
Yakagadzirirwa Borg chishandiso chekuchengetedza chine simba.
Akasiyana-siyana matekinoroji uye zvishandiso zvevagadziri, kunyanya zvinotungamirwa kumakore masevhisi.
Kupindirwa nekutadza kwematurusi, mitauro nemaraibhurari evagadziri vakaita saPython, Ruby, Perl, Go, Rust, Haskell pakati pevamwe.
Yemahara, yakagadzikana, inokurumidza, yakachengeteka uye iine kuita kwakakwira.
Maitiro ekudhawunirodha OpenSUSE Leap 42.3
Kuti uwane OpenSUSE Leap 42.3 ingo enda ku OpenSUSE software nzvimbo uye dhawunorodha vhezheni yacho inowanikwa zvinoenderana neyedu yekuvakisa. Vashandisi veiyo yapfuura vhezheni yeOpenSUSE vanogona kugadzirisa kubva chishandiso pane system inoitirwa icho chinangwa kana, vachikundikana izvo, tevera iyo simudzira gwara kubva kuOpenSUSE timu.
Iyi distro inotungamirwa kune chero mushandisi, kugadzikana kwayo uye zvakasiyana siyana software zvinotendera kuti ive chaiyo uye yakasimba imwe nzira kune chero imwe distro, saka tinokurudzira kuyedza uye kudanana nemumwe neiyo SUSE vimbiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » OpenSUSE Leap 42.3 yakavakirwa paSUSE Linux Enterprise 12 SP3 inowanikwa
Luis Bárcenas iyo Cabron akadaro
Dhonza iyo nyaya yekutsamira uye ichiri yakanyanyisa kubuda
Pindura Luis Bárcenas el Cabron
Jorge E. akadaro
Kugovaniswa kwakanaka kwazvo, ini ndanga ndichishanda ne openuse leap 42.2 kwemakore maviri, uye ini handinyunyute nezve chero chinhu, ndiri mushandisi wewindows, iyi ndiyo distro yandinogara nayo, mushure mekuyedza akawanda ayo zvakare akanakisa izvi zvakandipa chokwadi Tichaedza kuona kuti sei.
Pindura Jorge E.
Musikcube: A Terminal-Yakavakirwa Music Player
Maitiro ekugadzirisa ejimite nhengo neWordPress